Otu esi ahazi MIUI maka ngwa ọ bụla | Gam akporosis
Otu esi ahazi MIUI maka ngwa ọ bụla
Aaron Rivas | | Nkuzi, Xiaomi
N'ime oge karịa, anyị emeela ka o doo anya na Xiaomi MIUI bụ otu n'ime ihu ntanetị kachasị mma anyị nwere ike ịchọta taa. Na mgbakwunye na nke ahụ, ọ bụkwa otu n'ime mmiri kachasị na mmiri zuru oke, ihe dị oke mkpa nke nwere maka mmeri nke ekwentị mkpanaaka nke a na Redmi, nke na-ahọrọkwa ya, na ụzọ niile nke ụlọ ọrụ China.
N'ihi ọrụ a raara nye ya, na ụdị ọ bụla ọ natara, ọ na-emeziwanye ma na-enyekwu ohere mgbe ị na-ahazi ngalaba nke ọ bụla. Na MIUI 12 na akụkọ ọdịnihu dị n'akụkụ akuku, otu n'ime ihe ndị anyị nwere ike ịhazi maka mmasị anyị site na MIUI 10 bụ ngalaba ọkwa, anyị kọwaara ya otu esi enweta nkuzi a dị mfe ma baa uru.
Yabụ ị nwere ike ịhazi ọkwa na Xiaomi ma ọ bụ Redmi
Nke a bụ ihe dị mfe ịme. Nke mbụ, ị ga-enweta ntọala nke ama ama na MIUI. Iji mee nke a, ị ga-abanye Nhazi; ozugbo ahụ, na igbe nke iri na abụọ (ọnọdụ dị mma maka MIUI 11), anyị ga-ahụ ngalaba nke .Ma ọkwa, nke anyị ga-abanye iji mee mgbanwe niile anyị chọrọ.
Ihe mbụ anyị ga-ahụ ga-abụ ihe atụ atọ nke otu esi egosipụta ọkwa na ihuenyo mkpọchi (anyị na-egosi ha na nseta ihuenyo n'okpuru nke dị n'aka nri), ọkwa na-ese n'elu mmiri na akara ngosi na akara ngosi nke ngwa ndị ahụ. Ọ bụrụ na anyị pịa nke ọ bụla n'ime nhọrọ ndị a, anyị nwere ike ịhazigharị ngwa ndị nwere ike igosi ọkwa na ihuenyo mmeghe, nke ndị nwere ike igosi ọkwa site na windo na-ese n'elu mmiri na ndị nwere ike, site na akara ngosi ngwa ha, gosi ọtụtụ ọkwa iji gosipụta, naanị ịpịgharị mgbanwe ahụ site n'aka ekpe gaa n'aka nri ruo mgbe ọ ga-acha anụnụ anụnụ.
Mgbe ahụ, n'okpuru ihe atụ ndị a, anyị na-ahụ igbe nwere aha Ogwe ngosi, nke na-enye gị ohere ịgbanwe nhazi nke ejiri gosipụta ọkwa na ngosi ngosi; E nwere ụdị abụọ, nke bụ gam akporo -nke bụ nke a na-agbanwe na ndabara- na MIUI. N’okpuru, anyị na-egosi ihe nke ọ bụla dị ka ya.
Android Androidma Ọkwa
N'otu ntinye, ọ bụ Ọkwa na ọkwa ọkwa, ihe anyị na-akọwawanye Akụkọ a ọ na-egosi anyị nhọrọ iji zoo ma hazie ọkwa na ihuenyo ahụ, gosipụta ọsọ njikọ na ogwe ngosi, yana pasent batrị na ndị ọzọ.
Ugbu a laghachi na isi menu .Ma ọkwaN'okpuru igbe ndị a akọwapụtara, ngwa ngwa sistemụ niile dị ma wụnye ya na ntụgharị ha, nke, ọ bụrụ na arụ ọrụ (na-acha anụnụ anụnụ, yana bọọlụ n'aka nri), na-egosi na ha nwere ike igosi ọkwa. Na mkpokọta, a na-enyere ngwa niile aka ebe a ka, n'otu ụzọ ma ọ bụ ọzọ, ha na-egosi ọkwa.
Laghachi na ihu atọ gosipụtara dị ka ihe atụ, anyị nwere ike ịhazi otu ngwa ọ bụla nwere ike isi gosipụta ọkwa. Ngwa ngwa dịka WhatsApp, Telegram, Facebook Messenger na mmadụ ole na ole ndị ọzọ ka akara aka iji gosipụta ọkwa dị na mkpọchi ahụ, mana ọbụlagodi na ị nwere ike ime ka - ma ọ bụ gbanyụọ- ụfọdụ ma ọ bụ ihe niile, ọ dabere na mmasị anyị, nke mere na Instagram ma ọ bụ nke ọzọ ngwa anyị nwere ike iche maka ịdọ anyị aka na ntị maka ozi ma ọ bụ ihe ọ bụla na-enweghị ịkpọghe ekwentị.
Otu esi eme ka oghere nke abụọ rụọ ọrụ na Xiaomi MIUI
Ọ bụrụ na anyị chọrọ ngwa iji gosipụta -ma ọ bụghị ọkwa na-ese n'elu mmiri na MIUI, naanị anyị ga-enweta ihe atụ ahụ n'etiti. N'ebe ahụ, anyị nwere ike ịhazi nke a, ihe nwere ike ịba uru karịsịa ma ọ bụrụ na ị kpọrọ asị na n'oge enweghị nchetụ echiche na-ese n'elu mmiri na-egosi n'etiti ọrụ ị na-eji ngwaọrụ gị.
Ọ bụrụ na anyị chọrọ ka egosipụtakwa ọkwa a - ma ọ bụ kwụsị ịme ya- na akara ngosi nke ngwa ahụ, anyị ga-abanye Ihe ngosi icons ma gbanye ma ọ bụ gbanyụọ ha n'ụzọ omenala site na iji ngbanwe.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Nkuzi » Otu esi ahazi MIUI maka ngwa ọ bụla
Etu esi echekwa batrị na ekwentị Xiaomi site na onye na-echekwa ike